Roobel oo raacdeyay adeegayaal Fahad oo ku jiray FEIT | KEYDMEDIA ENGLISH
Roobel oo raacdeyay adeegayaal Fahad oo ku jiray FEIT
RW Rooble, wuxuu Cirro iyo Xiirane, ku beddelay Irshaad Maxamuud Daahir iyo Xasan Cali Yuusuf, halka uu Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ku amray in baaris deg deg ah lagu sameeyo xubnaha laga saaray guddiga FEIT iyo kuwa loo digay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa xubinnimadii Guddiga Doorashoyinka heer Federal [FEIT], ka xayuubiyay, Maxamed Xasan Maxamed [Cirro], Guddoomiyihii hore ee Guddiga iyo Cabdiraxiim Cabdicasiis Aadam [Xiirane], Xog-hayihii hore ee Guddiga.
Cirro iyo Xiirane, waxa ay ka mid ahaayeen, xubno uu Fahad Yaasiin ku daray FEIT, si ay danahiisa gaarka ah uga shaqeeyaan. Xilalkii ay hayeen ee Guddoomiyaha iyo Xog-hayaha ayay hore u waayeen, halka ay ugu danbeyn lumiyeen xubinnimadoodii, sababo la xariira in ay qabaanno u yihiin Fahad iyo Farmaajo oo faraha dhiig ku leh.
Cirro iyo Xiirane, waxa ay shalay ku keceen falal ka baxsan anshaxa shaqada oo lagu hor istaagayo habsami u socodka shaqada guddiga, waxayna isku dayeen in ay hor istaagaan howlaha shahaado bixinta ee ka socda xarunta Guddiga ee ku taalla xeyndaabka garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle, ee magaalada Muqdisho.
Rooble, wuxuu sidoo kale, digniin kama danbeys ah siiyay, Yuusuf Cabdikheyr, Cabdinaasir Maxamed, Cabdijabbaar Cabdullaahi, Axmed Aadan, Sacdiyo Xasan, oo intooda badan Guddiga ka soo galay dhanka NISA, wuxuuna ugu baaqay in ay ka waantoobaan falalka isugu jira cabsi gelinta iyo musuqmaasuqa.
RW Rooble, wuxuu Cirro iyo Xiirane, ku beddelay Irshaad Maxamuud Daahir iyo Xasan Cali Yuusuf, halka uu Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ku amray in baaris deg deg ah lagu sameeyo xubnaha laga saaray guddiga FEIT iyo kuwa looga digay carqaladeeynta habsami u socodka howsha shahaaddo bixinta.
Rooble, wuxuu bogaadiyay dadaalka Guddiga FEIT iyo guddoonkooda iyo Xog-hayeyaasha Guud ee Labada Gole, halka uu hambalyo hordhac ah u diray Xubnaha Baarlamaanka ee ilaa hadda qaatay Shahaadada xildhibannimo, kuwa dhimanna wuxuu ku boorriyay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u qaataan shahaadada.
Ra’iisul Wasaaruhu, wuxuu sheegay in ay socdaan qorshayaal gurrucan oo la doonayo in lagu carqaladeeyo hirgalinta Jadwalka dhaarinta xildhibaannada ee uu soo saaray Guddiga FEIT, taasoo uu ku macneeyay in Kooxda waqtigu ka dhamaaday diiddan yihiin dhammeystirka doorashada dalka oo hadda gabagabo ah.
RW Rooble, wuxuu sheegay in ay jiraan isbaheysiyo gudaha iy dibadda ah oo lagu doonayo in lagu hor istaago dhammeystirka howlaha doorashooyinka, wuxuu muujiyay jiritaanka khatar amni oo xooggan, wuxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay dareen dheeri ah muujiyaan, una istaagaan badbaadada dalka.
Sida cad, Fahad iyo Farmaajo, waxa ay dadaal ugu jiraan in aysan qabsoomin dhaarinta Xildhibaannada Baarlamaanka 11-aad, si uusan dalku u aadin doorashooyinka kuraasta Guddoonka Golayaasha iyo Madaxweynaha, taasoo ay ku baraarugsan yihiin in ay guuldarro kharaar kala kulmi doonaan.